Shaqaale darro ka taagan cutubyada ciidanka ammaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciidammo ka tir-san gaashaan-buurta Naato oo tababar ku jira.. Foto: TT.
Shaqaale darro ka taagan cutubyada ciidanka ammaanka
La daabacay måndag 9 november 2015 kl 11.11
Shaqaale-darro ayaa ka aloo-san qeybo badan oo ka mid ah cutubyada ciidammada qalabka sida ee dalkan Sweden. Middaasina oo saameeyn aan wanaagsaneyn ku yeelaneeysa in ciidammadu helaan tababar ku filan iyo habka diyaargarowga ciidankaba.
– Qayb ka mid ah ccutubyada ciidammada ee afkan iswiidhiska lagu yiraahdo Livbataljonen ayey ka bannaan yihiin 20 illaa iyo soddomeeyo boos, middaasina oo ay ugu wacan tahay fasaxyada shaqada laga qaato iyo dadyoowga jirrada ku qoran, sida uu sheegay Christer Tistam, ahna madaxa ciidanka Livgardet ee magaalada Stockholm oo ka warramayay xaaladda cutubka.
Christer Tistam ayaa u arka in rajadu ay wanaag-san tahay eyna buuxin doonaan boosaska bannaan, maadaama la bilaabey sidii loo shaqaaleeyn lahaa dadyoow cusub ee baahida buuxin doona.
Hase yeeshee sida ey sheegeen ilo lagu kalsoon yahay in baahida shaqaaluhu ka aloosan tahay dhammaan noocyada kala duwan ee ciidammada qalabka sida, iyadoona xaaladda ey ciidammadu ku jiraan ay tahay mid cakiran.
Idaacadda Sveriges Radio ayaa codsatay inay hesho dhammaan boosaska ey shaqooyinku ka bannaan yihiin ee ciidammada qalabka sida, hase yeeshee lagu war-geliyey in aaney suurtagal ahayn maadaama uu arrinkaasi sir u yahay ciidammada. Hase yeeshee ey shan cutub oo idaacaddu akhbaartooda heshay ey dhammaan ka taagan yihiin shaqaale darro. Waana mid saameeyn ku yeelaneeysa howlaha ciidammada qalabka sida, sida uu sheegay Karl Engelbrektson, ahna madaxa laanta wax-soo saarka cutubka.
– Arrinkaasi waa mid saameeyn aan wanaagsaneyn ku yeelanaya dhanka howl-galka ciidanka. Midda la sameeyn karaana waxay tahay in tababar la siiyo un ciidammada ka soo bixi kara howlahooda, sida uu sheegay Karl Engelbrektson.
Isha/ Sveriges Radio